Ajụjụ - Shandong Landian Biological Technology Co., Ltd.
&Lọ Ọrụ R & D
Ikike nchọpụta ikike
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta ihe dị ukwuu, oge mbu bụ ụbọchị 20-30 mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nnwapụta ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.